Iwo mashanu Akanyanya Kubata maEcommerce Sites | ECommerce nhau
Iwo mashanu akanakisa eHostings eEcommerce saiti
Kana zvasvika pakubata webhu kune zvitoro zvepamhepo, zvese zviri maererano nemhando yebasa uye nhamba yezvinhu zvinowedzera kuita kwebhizinesi. Mupfungwa iyi, pazasi isu tinogovana akanakisa maHostings eEcommerce saiti ayo anonyatso kumira nekupa yakanakisa sevhisi uye akanakisa maficha.
1 1. Kugamuchira Source
4 4. Wakasimba
5 5. SHAMWARI 1 Kubata
1. Kugamuchira Source
Este Kubatira Ecommerce inoshanda kubvira 2005 uye parizvino inoonekwa seimwe yeakanakisa webhu saiti yechitoro chepamhepo. Iyo kambani inopa VPS pamwe ne server Kubata yakatsaurirwa pamitengo inonzwisisika, inotopa bhuru re RAM zvigadziriso zveWindows neLinux, uyezve inopawo yakawedzera IP kero uye SSL zvitupa zvekuchengetedza.
Iyo zvakare imwe yeiyo yakanakira kuitisa Ecommerce, kunyanya inokurudzirwa kumakambani madiki nepakati nepakati. Iyo inopa yakazara package yemasevhisi ekushandisa nyore nyore chitoro chepamhepo. Izvi zvinosanganisira matemplate emahara, SEO yakagadziridzwa e-commerce system, dziviriro yedata, pamwe neyakajairika dhizaini uye akaganhurirwa email maakaundi.
Este Pamhepo chitoro chekutora chinopa chero chero mhando yekubata sevhisi, kusanganisira maseva, akagovaniswa uye akazvitsaurira maseva emakore. Iwe unogona zvakare kusarudza pakati peWindows neLinux anoshanda masystem kana kunyangwe kushandisa ese maviri kune imwezve yekuchaja. Iyo inopa 24/7 technical technical, zvese mune chat uye nefoni.
Este Ecommerce chitoro chekutapa chinopa ekuchengetedza mhinduro inonyatso kutarisirwa neyakavanzika server. Inopawo gore rekutora, data centre uye data yekudzosa sevhisi kana zvikatadza.
5. SHAMWARI 1 Kubata
Mukuvhara, ichi ndicho Ecommerce inomiririra iyo inopa yakatsaurwa yekutambira, colocation, uye network masevhisi. Inokurudzirwawo kumakambani epakati nepakakura; yayo data centre zvivakwa iri muEurope neNorth America.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Iwo mashanu akanakisa eHostings eEcommerce saiti
Iyo yepamusoro 5 yepamusoro yeEcommerce mapuratifomu e2016